Home Wararka Qarax weyn oo hadda ka dhacay Kismaayo
[Video +DEG DEG] Qarax weyn oo hadda ka dhacay Kismaayo
Wararka aanu ka helayno magaalad Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in uu ka dhacay qarax xoogan, kaasi oo oo lala eegtay gaari Bus ah oo ay saarnayeen Ciyaartooy.
Ciyaartoyda saarna Buska ayaa waxay ahaayeen kooxda JCCI oo ka dhisan magaalada Kismaayo, sida ay goob joogayaal u sheegeen MOL.
Gaariga uu qaraxu haleelay ayaa gebi ahaanba gubtay, waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkasta oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin.
Waxaa goordhoweyd gaaray goobta Qarax uu ku haleelay gaariga Laamaha amaanka iyo kooxaha gurmadka deg deg ah oo ayagu bilaabay samata-bixinta ciyaartooyda.
Wixii faah-faahin ah kala soco halkaan